Condo for Sale in Pazundaung - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Condos for Sale in Pazundaung
🏡ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ က်ီေတာ္လမ္း ၊MiniCondo ၊ ပထမထပ္ ၊အက်ယ္အဝန္း (13×60) ၊ BR2...
Pazundaung | Yangon Region
Ad Number S-10172354
ရေကျော်လမ်းမပေါ်ရှိ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ (၇)လွှာ ကွန်ဒိုအခန်း (ညှိနှိုင်း)ဖြင့် ရောင်းမည်။
Phone No. To Contact Thiri Yangon Real Estate
Ad Number S-10169150
Thiri Yangon Real Estate Close
Phone No. To Contact Shwe Nann San Eain Real Estate & General Services Company Limited
Ad Number S-10156416
Shwe Nann San Eain Real Estate & General Services Company Limited Close
🏡ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားအနီး၊ 7F ၊ အက်ယ္အဝန္း (18×60) ၊ BR-3 ၊ lift ပါ...
Ad Number S-10155876
Ad Number S-10155771
🙏🙏🙏...ရေကျော်လမ်းမကြီးပေါ် မိုးသီးဆေးခန်းအနီးတွင် Minicondo အခန်းလေးပြင်ဆင်ပြီး...
Phone No. To Contact Aung Ta Khit Real Estate Service.
Ad Number S-10153864
Aung Ta Khit Real Estate Service. Close
🙏🙏🙏...ပုဇွန်တောင် ရေကျော်လမ်းမပေါ်တွင် Minicondo အခန်းသန့် အဆင်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး...
Ad Number S-10136983
2,200 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact HtooKabar အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်
Ad Number S-10135876
HtooKabar အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
ရေ​ကျော်လမ်းမ​ပေါ်တွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အလွှာမြင့် ကွန်ဒိုအခန်းသန့်ရောင်းမည်။
Phone No. To Contact ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
Ad Number S-10133995
ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ Close
ရန်ကုန်မြို့ မြို့လည်ခေါင် မဟာနဝရက် Condo အခန်းသန့်ရောင်းမည်။
Ad Number S-10133972